ကောင်းအောင်ကြိုး၍ ကောင်းကျိုးကိုယ်၌ တည်စေမင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီအများအပြားသည် ကုမ္ပဏီနာမည်ကောင်းရအောင် ပြန်လည်ကြိုးစားလျက်ရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့၏အတိတ်ကို ချေဖျက်နိုင်ရန် ပရဟိတအလုပ်များ လုပ်ဆောင်ပေးရုံမျှနှင့် မရနိုင်ပေ။
ရခိုင်အရေးတွင် ဥပဒေအရ မ ျှမ ျှတတလုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား
တပ်မတော်က နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုများ ရှိနေသည်ဟူသည် စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရက ဖုံးကွယ်ထားရန် ကြိုးပမ်းမည်မဟုတ်ပဲ တရားဥပဒေအရ သေချာစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဂျပန်နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ကတိပြု ပြောကြားလိုက်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားသည်ဟု စွပ်စွဲမှုများကို အချိန်ယူ စစ်ဆေးရန်လိုဟု သံတမန်များ ပြောကြား
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်ကလည်း မြေပြင်သတင်း အချက်အလက် အမှန်အကန်ကို အားလုံးသိရှိနိုင်ရေးအတွက် သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စွပ်စွဲချက်များကို အတည်မပြုနိုင်ခဲ့ဟု Ms Renata က ပြောကြားသည်။
မြန်မာ့သြဘာ စီအီးအို – ‘သီးနှံဈေးနှုန်းတွေက အဓိကပြဿနာရပ်ပါ’
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မေးမြန်းခဲ့သည့် အင်တာဗျူးတစ်ခု၌ အစိုးရက စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မည်သို့တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း၊ ၎င်း၏ကုမ္ပဏီနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတကာငွေကြေး ကော်ပိုရေးရှင်း IFC တို့၏ လတ်တလော ချေးငွေသဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံထံမှ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသည့် ဈေးပေါသော ထုတ်ကုန်များက မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကို အန္တရာယ်ပြုနေပုံများအကြောင်း ဦးသတိုးဟိန်းက Frontier ကို ပြောကြားသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆော့လော်တွင် ဆန်ပြတ်လတ်ကာ ဆန်တစ်အိတ် ကျပ်တစ်သိန်းအထိ ဈေးမြင့်တက်
တပ်မတော်က စောင့်ကြပ်နေသည့် လုံခြုံရေးဂိတ်များကို ဖြတ်သန်းကာ ဆော့လော်မြို့သို့ သွားရောက်ပါက ကားတစ်စီးတွင် ယခင်က ဆန်သုံးအိတ်နှင့် ဆီငါးပိဿာ သယ်ယူခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် သုံးလခန့်မှစတင်ကာ ကားတစ်စီးလျှင် ဆန်တစ်အိတ်နှင့် ဆီသုံးပိဿာကိုသာ လုံခြုံရေးဂိတ်များက ခွင့်ပြုတော့သည် ဟိန်းကိုစိုး ရေးသားသည်။ နိုဝင်ဘာ ၃ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆော့လော်ဒေသတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုနှင့် လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာ.
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လမ်းမတွေထက်မှာ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့နေတာတွေကို အဓိကတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရတာက အစိုးရဝန်ထမ်း ယာဉ်ထိန်းရဲတွေဖြစ်ပေမဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတော့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ယာဉ်ကြောရှင်းလင်းပေးသူတွေကပဲ တာဝန်ယူထားပါတယ်။ ထွန်းခိုင် ရေးသားသည်။ ပေ ၂၀ လောက်ပဲအကျယ်ရှိတဲ့ တာမွေမြို့နယ်၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်က ကွန်ကရစ်လမ်းမတွေပေါ်မှာ ကားတွေက ရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်သာနဲ့ ရပ်တန့်နေပါတယ်။ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေက လူသွားလမ်းပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာ.
မြန်မာနိုင်ငံကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရှစ်ဘီလျံနီးပါး ကူညီမည်ဟု ဂျပန်ကကြေညာ
အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများမှ ပေးအပ်မည့် အဆိုပါ ယန်း ၈၀၀ ဘီလျံ (ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၇ ဘီလျံ)အား အချိန်ငါးနှစ်ကာလအတွင်း ပေးအပ်မည်ဟု အာဘေးကပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ သံတမန်များ လေ့လာရေးသွားရောက်
မူဆလင်ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်များမှု ရှိနေသည်ဟု အစိုးရအပေါ် စွပ်စွဲမှုများ မြင့်တက်နေချိန်တွင် တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဒေသများကို လေ့လာရန် နိုင်ငံခြားသံတမန်များ ယနေ့ သွားရောက်ကြပြီဖြစ်သည်။
ချင်းတွင်းရေယာဉ်နစ်မြုပ်မှုအတွက် ရေယာဉ်မောင်းသူကို ဖမ်းဆီး အရေးယူထား
ပြီးခဲ့သည့်လက လူဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို သေဆုံးစေခဲ့သည့် ရေယာဉ်နစ်မြုပ်မှုအတွက် အဆိုပါရေယာဉ်မောင်းသူအား ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်လများ ချမှတ်နိုင်သည့် ပုဒ်မများဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားသည်။